Duqa Muqdisho oo mudnaan gaar ah siinaya Ololaha dalxiiska Caasimadda+Sawirro – Bandhiga
Duqa Muqdisho oo mudnaan gaar ah siinaya Ololaha dalxiiska Caasimadda+Sawirro
Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Eng Yariisoow oo xeebta dagmada Xamar Jajab kaga qeyb galay barnaamij ka mid ah Olalaha Dalxiiska Caasimadda Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah uu ugu shaqeyn doono sidii Soomaaliya loogu soo dalxiisi lahaa.
Waxaa barnaamijkan soo agaasimay waaxda gobalka banaadir u qaabilsan dalxiiska iyadoo lagu casuumay gudoomiyaha gobalka Banaadir waxaana ka soo qeyb galay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee Muqdisho ku noolo.
“Dalxiisku waxa uu astaan u yahay nabadda iyo horumarka bulshada, waa farriin cad oo ku wajahan argagixisada doonaysa in ay niyad jabiyeen shacabkeenna, muuqaal khaldanna ay ka bixiyaan dalkeenna.”
Caasimadda Muqdisho ayaa caan ku ahayd goobo badan si weyn loogu soo dalxiis tagi jiray ku dhawaad 30 sano ka hor, waxaase hadda muuqda in howlahaasi dib loo soo celinayo iyadoo dalka uu ka soo kabanayo dhinacyo badan oo saameyn ku yeeshay burburkii dalka.
Cuntooyinka dhaqanka ah u dadka Soomaaliyeed, hiddo iyo suugaan ayaa lagu mashxaradeeyay kulankii dalxiiska ahaa ee Eng Yariisoow uu kula qaatay xeebta dagmada Xamar Jajab ee gobalka Banaadir.